Nuqulka mooshinka loogu soo horjeedo R/Wasaare Saacid iyo Xukuumadiisa oo xildhibaanada la qeybinaayo maanta – idalenews.com
Xildhibaanada Baarlamaanka Soomaaliya ayaa maanta lagu wadaa in loo qeybiyo nuqulada mooshinka ka dhanka ah Xukuumada Soomaaliya, kaasoo shalay uu cadeeyay Gudoonka Baarlamaanka Soomaaliya.
Nuqulada ayaa la filayaa inay mudanayaasha muddo 5-maalmood ku soo aqristaan, iyadoo 22-ka bishan la filayo in Xukuumada ay hortimaado Baarlamaanka, si codka kalsoonida loogu qaado.
Gudoomiye kuxigeenka labaad ee Baarlamaanka Mahad Axmed Cawad ayaa sheegay in tiradii loo baahna ay soo gudbiyeen mooshinka, isla markaana qodobka 75aad ay dhigeyso in shan meelood hal meel hadii la helo mooshin la keeni karo.
Xildhibaan C/rashiid Maxamed Xidig oo ka mid ah mudanayaasha ka keenay Xukuumada mooshinka ayaa sheegay in Xukuumada ay wax ka qaban weysay dhamaan waxyaabihii loo igmaday, isla markaana muddo lix bilood ay u buuxsantay, iyadoo aan waxba qaban.
“Ujeedada waxa weeyaan waa kalsooni kala noqosho, Xukuumada wax ay qabatay haba yaraatee ma jirto, arrimihii gudaha wax bey ka qaban weysay”ayuu yiri Xildhibaan Xidig.
Mooshinkan ka dhanka ah Ra’iisul Wasaaraha ayaa maalmihii u dambeeyay diyaarintiisa si xowli ah uga socotay magaalada Muqdisho, iyadoo xildhibaanada ilaa haatan saxiixay mooshinka ay gaarayaan ilaa boqol xildhibaan.